ပြင်ဆင်ရန် ကြွယ်ဝပြီး ရိုးရှင်းသော အချိုပွဲ Nougat ကိတ်မုန့်။ | မီးဖိုချောင်ချက်ပြုတ်နည်းများ
Montse Morote | 04/01/2022 09:00 | မုန့်ချို
Nougat ကိတ်မုန့်၊ မီးဖိုမပါတဲ့ အချိုပွဲနဲ့ ငါတို့ကျန်ခဲ့တဲ့ nougat ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး သုံးရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းပြီး အရမ်းကောင်းတဲ့ ကိတ်မုန့်။ ကျွန်ုပ်တို့ထားခဲ့သော nougat ကို အခွင့်ကောင်းယူရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အများအပြားပါဝင်သည့် ကိတ်မုန့်သည် လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်မည့် နူးညံ့သော နူးဂတ်အရသာဖြင့် များစွာအကြိုက်တွေ့စေမည်ဖြစ်သည်။ အချိန်တိုအတွင်း အသင့်ပြင်ဆင်နိုင်သော အိမ်လုပ်အချို။
ကွတ်ကီး ၁ထုပ် 1g.
၆၀ ဂရမ်။ ထောပတ်၏
350 ml ။ နို့
350 ml ။ ကြာပွတ်မုန့်
300 - 400 ဂရမ်။ ဗာဒံစေ့
6 gelatin စာရွက်များ
အလှဆင်ရန်၊ ခရိုကန်တီဗာဒံစေ့၊ ချောကလက်၊ ချောကလက်ခေါက်ဆွဲ….
Nougat ကိတ်မုန့်ကိုပြင်ဆင်ရန်အတွက် gelatin အရွက်များကိုရေထဲထည့်ခြင်းဖြင့် ဦးစွာစတင်ပါမည်။ မှိုကိုယူပြီး ထောပတ်အနည်းငယ်နဲ့ ဖြန့်လိုက်ပါ။
ကွတ်ကီးတွေကို လှီးဖြတ်ပြီး ထောပတ်ကို မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ထဲမှာ စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက် အရည်ပျော်အောင်ထားလိုက်ပါ။ ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးထဲမှာ ကွတ်ကီးနဲ့ ထောပတ်ကို ထည့်ပါ။ ကောင်းစွာရောမွှေပြီး မှို၏အောက်ခြေကို ဖုံးအုပ်ထားပါ။ အဲဒါကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထည့်ထားပြီး အရံလုပ်ထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် nougat မုန့်ကိုပြင်ဆင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Nougat ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပါ။ မုန့်နှင့်နို့ကို ဒယ်အိုးတစ်လုံးထဲတွင် အပူပေးကာ နူးဂတ်အပိုင်းများထည့်ကာ အားလုံးမုန့်သွားသည်အထိ မွှေပေးပါမည်။ ခုတ်ထားတဲ့ ဗာဒံစေ့တွေကို မတွေ့ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ကြိတ်လို့ရပါတယ်။
gelatin အရွက်များကို ကောင်းစွာ သန့်စင်ပြီး ရေနွေးပူပူတွင် ထည့်ပါ။ gelatin ပျော်သွားသည်အထိ ရောမွှေပါ။ ပွက်ပွက်ဆူလာသည်ကို မြင်သောအခါ မီးဘေးမှ ခွာသွားကြသည်။
ရေခဲသေတ္တာထဲကမှိုကိုဖယ်ရှားပြီး ခရင်မ်ကိုထည့်ပါ၊ ခရိုကင်တီဗာဒံစေ့ သို့မဟုတ် သင်နှစ်သက်သည့်အတိုင်း ဖုံးအုပ်ထားပါ။ 6-7 နာရီ သို့မဟုတ် တစ်ညလုံး ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ထည့်ထားပါ။
ဤအချိန်ပြီးနောက်၊ ငါတို့သည်ထုတ်ပြီးအစေခံ။ ချောကလက်၊ whipped cream နဲ့တွဲစားလို့ရတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ဟင်းလျာများ » မုန့်ချို » Nougat ကိတ်မုန့်